Maamulka Jubaland oo digniin u diray musharrixiinta (daawo | dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 4, 2019 2:01 g 0
Wasiirka Amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xassan Cabdi Nuur Janan oo Maanta shir jaraa’id Warbaahinta ugu qabtay degmada Dooloow ee Gobolka Gedo ayaa ka hadlay xaalada amni ee degaanada Jubbaland iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo.
Waxa uu ka codsaday musharixinta Madaxweynaha Jubbaland ee doonaya inay tartamaan in ay dhowraan,isla markaana ay ilaaliyaan nabadgelyada inta ay wadaan ol olahooda doorashada.
Isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in cid walba oo reer jubbaland ah sidoo kalena buuxisa shuruudaha musharixiinta ay qeyb geli karto doorashada,islamarkaana aysan jiri doonin cid sigaar ah looga hor-istaagi doono doorashada.
Musharixiinta Madaxweynaha ayuu uga digay inay sameeyaan waxyaabo khalqal gelin kara amniga,waxaana laamaha amniga Jubbaland uu faray inay si dhow ula Shaqeeyaan musharixiinta si gaar ah kuwa sida nabadgelyada ah xilka ku raadinaya.
Digniintaan loo diray Musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ayaa kusoo aadeysa xilli Xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah musharixiinta Madaxweynaha uu sheegay inay ka walaacsan yihiin faragelin lagu sameeyo doorashada.